Kaymaha: astaamaha, qaab dhismeedka, goobta, dhirta iyo xayawaanka | Cusbooneysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | 27/04/2021 09:27 | Deegaanka
Waxaa jira bey'ado badan oo deegaanka ah oo kuyaal meeraha kuwaas oo hoy u ah qayb ballaaran oo ka mid ah dhammaan nooleyaasha guud ahaan. Dejinta nidaamka deegaanka ee leh astaamo isku mid ah waxaa loo yaqaan biome. Biome ka keymaha roobka Waxaa loo yaqaan magacyo badan oo kala duwan: keymaha roobka, keymaha cufan, hawdka, iyo kuwa kale. Waxay u muuqataa inay leedahay tiro aad u tiro badan oo ah dhirta iyo xayawaanka fauna iyo sidoo kale in lagu garto inay leedahay geedo waaweyn. Waa mid ka mid ah nidaamyada deegaanka ee ugu muhiimsan meeraha.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa qodobkaan si aan kuugu sheegno wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato keymaha roobka iyo muhiimadda uu leeyahay.
1 Goobta keymaha
2 Noocyada kaymaha roobka
2.1 Kaymaha roobka
2.2 Keymo hawleed
3 Qaab dhismeedka kaymaha roobka
Waxa ugu horreeya oo dhan waa in la ogaado aagagga meeraha ay ku yaalliin noolaha noocan ahi. Goobta juquraafi ahaan hawdka wuxuu daboolayaa qiyaastii 6% dusha sare ee dhulka waxayna ku taalaa gaar ahaan kuleylka Capricorn iyo kuleylka kansarka. Gobollada qaaradda Aasiya waxaa matala kaynta kulaylaha iyo qaar ka mid ah qaaradaha Mareykanka iyo Afrika. Waxaa jira qaar kaymo ah oo ku yaal jasiiradaha Oceania oo ah keyn aan caadi ahayn oo hawd ah.
Waa in lagu xisaabtamo in cufnaanta kayntu ay muhiim tahay si loo martigeliyo tiro badan oo kala duwanaansho kala duwan ah. Hadaynu eegno kaymaha ugu muhiimsan ee dhulkeenna hodanka ku ah, maahan inaan aadno Koonfurta Ameerika. Halkan waxaan ku haynaa hawdka Amazon. Kaymaha Amazon waxaa sidoo kale loo yaqaan Amazonia. Keynta labaad ee ugu muhiimsan waa kaymaha Congo iyo kuwa kale ee ka hooseeya qoto dheer gobolada Madagascar, Mexico, Guatemala, Argentina ama New Guinea.
Noocyada kaymaha roobka
Waxaan arki doonnaa waxa ay yihiin noocyada kaymaha ee kala duwan astaamahooda iyo meesha ay ku yaalliin. Waxaa jira noocyo kala duwan oo laga soo qaado aragtida aasaasiga ah sida kaymaha kuleylka ah iyo kuwa kuleylaha ah. Aynu aragno waxa ay yihiin noocyadan guud:
Waxay ku taal deegaanno badan oo qoyan oo diirran oo leh gobollo ay jawiga dhulbaraha u muuqdo. Waxaan ka badnaan lahayn ama ka yaraan lahayn 10 darajo woqooyi iyo koonfur haddii aan soo qaadno dhulbaraha tixraac ahaan. Heerkulka kaymaha roobku waxay socdaan sanadka oo dhan inkasta oo loo maleeyo. Celcelis ahaan wuxuu u dhexeeyaa 21 ilaa 30 digrii, sidaa darteed waa heerkul aad u sarreeya. Waxay u taagan tahay haysashada xaddi badan oo roobab soo noqnoqda iyo xoog leh.
Kaymaha ugu badan ee roobku waa Koonfurta-Aasiya, Bartamaha Ameerika, Koonfurta Ameerika, Bartamaha iyo Galbeedka Afrika, Australia, Galbeedka Hindiya, iyo jasiiradaha New Guinea. Kaymaha Amazon waxay leeyihiin hodan aan caadi ahayn oo dhir iyo xayawaanba leh. Waxaa loo tixgeliyaa sambabka meeraha, in kasta oo aanu gebi ahaanba sidaa u ahayn tirada badan ee geedaha ee fuliya sawir-qaadista oo ka caawiya sida kaarboon-dioxide u liqdo inuu u nadiifiyo qayb ka mid ah gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo ee dadku u sii daayaan hawada. Gaasaskan ayaa ah kuwa sababa isbedelka cimilada, waana sababta kaymaha Amazon waa qayb muhiim ah oo lagu joojinayo kororka kuleylka adduunka.
Way ka yar yihiin kuwa kulaylaha waxayna ku yaalaan gobollo heer kulkoodu xoogaa qabow yahay oo ka fudud yahay. Gaar ahaan waxaa lagu qoondeeyay cimilo-biyood qoyan laakiin waxaa sidoo kale laga heli karaa gobollada leh cimilo qoyan ama kuleyl leh.
Haddii aan is dul dhigno khariiddada, waxaan ka heli karnaa aag xeebeed iyo buurood oo uu ku yaal kaynkan dhexdhexaadka ah. Markay heer kulka, waxaan aragnaa inay hareeraha joogaan 10 iyo 21 darajo Celsius, marka waxay leeyihiin heer kul hoose marka loo eego keymaha. Roobku sidoo kale aad ayuu uga hooseeyaa maaddaama oo uusan jirin qoyaan badan sida deegaanka kale. Waxaan ka heli karnaa gobollada koonfurta Australia, Japan, Boqortooyada Ingiriiska, Norway, New Zealand, xeebta waqooyi-galbeed ee Waqooyiga Ameerika. (Tusaalooyin; waxay noqon laheyd keynta Valdivian ama keynta roobka ee dhexdhexaadka ah ee Appalachians)
Qaab dhismeedka kaymaha roobka
Aan aragno qaab dhismeedka kaynta kulaylaha iyo waliba inta kale. Dhirta dhirta iyo dabiici ahaanta waxay ka dhigeysaa kaymaha qaab dhismeed ka kooban 4 lakab oo jiifa Waxaan baran doonaa mid kasta oo ka mid ah lakabyada:
Lakabka pop-up: Waxay ka kooban tahay geedo badankood dhererkoodana waa ka badnaan karaa 40 mitir. Waa geedo u adkaysan kara qoraxda daran waana lakabka ugu sareeya. Dhirta halkaan laga helo waxay u badan yihiin kuwa cagaaran oo leh caleemo aad u yaryar. Dusha sare ayaa wax badan leh waxayna ka caawisaa ka hortagga qalalan ee ay keento shucaaca qorraxda ee xad-dhaafka ah.
Nano Waa dabaqa labaad ee keynta kulaylaha wuxuuna leeyahay dherer qiyaastii ah 30-45 mitir. Waa aagga ay laamaha iyo taajka geedaha isugu yimaadaan si ay u sameeyaan unug cufan oo caleemo iyo laamo ah. Waa la dhihi karaa waa nooc ka mid ah xuubka weelka ee lakabyada hoose. Lakabkaan waxaa ku yaal inta badan noocyada kala duwan ee dhirta iyo xayawaanka laga helo nidaamyadan deegaanka.
Hoos udhaca: Waxay ku taal dahaadhka hoostiisa waana aag leh qoyaan badan iyo xaaladaha iftiinka qoraxda oo hooseeya. Halkan dhirta ugu weyn ee jira waa dhir leh caleemo waawayn oo soo saaray cabbirkan si ay awood ugu yeeshaan inay qabsadaan iftiinka yar ee jira oo leh laamo aad u gaaban.
Dhul: ugu dambayntii waxaan haysannaa lakabka ciidda oo dhirtu si tartiib tartiib ah ugu korto sababo la xiriira iftiinka hooseeya ee gaaraya cufnaanta dhir badan. Caleemaha ballaaran ee dhirta dhulka ayaa taagan oo qaddar badan oo walxo dabiici ah u baaba'aya ayaa la helay. Carradan ayaa ah kuwo aad qani u ah oo wax soo saar leh.
Waxaan soo sheegnay in keymaha roobku ay leeyihiin noocyo badan oo kaladuwan oo isugu jira dhir iyo xayawaan. Waxay ku sifoobeen iyagoo haysta buugga duugga ah ee noocyada hawdka iyo dhir kala duwan iyo noocyo yeelan kara dherer aad u tiro badan haddii aan ku darsano noocyo kale oo ka yar nidaamyada kale ee deegaanka.
Faa'iidada dhirta badani way ku kala duwan tahay aragtida aadamaha xagga daawooyinka iyo uruurinta laydhka iyo cinjirka. Ka mid ah dhirta ugu muhiimsan ee laga helo hawdka waxaan leenahay lianas, orchids, bromeliads, xoortay, iwm
Marka laga hadlayo faunada, waxaan sidoo kale leenahay tiro badan oo faun ah cunada badan awgeed. Waxaa jira noocyo kaladuwan oo noocyo qalaad ah oo dhammaad leh oo qayb ka ah noolaha noocan ah ee cajiibka ah. Waxaa lagu gartaa inay leeyihiin noocyo kaladuwan oo cayayaan ah sida qudhaanjada, dukhsiga, cayayaanka dhejiska ah, balanbaalista, iyo kuwa kale. Waxaan kaloo leenahay xoolo waaweyn sida xayawaan, daanyeer, qoolley, nooc kasta oo masas ah, jaguar, fiidmeer, Shabeel, yaxaasyo, rahyo badan iyo tarantulas... iwm.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto keymaha kuleylaha ah iyo astaamahiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Kaymaha roobka